twitter | My Burmese Blog
Posts Tagged: twitter	Seesmic for iPhone
On May 22, 2010	by Htoo Tay Zar	With	0 Comments	- iPhone	Seesmic ဆိုတာက Adobe AIR နဲ့ အလုပ်လုပ်တဲ့ Twitter + FaceBook desktop application ပါ။ Seesmic ကို အခြား BlackBerry, Android တွေမှာ app free ရတာ နဲနဲကြာပါပြီ။ အခုကတော့ iPhone (AppStore Download Link) မှာ စရတာပါ။ Seesmic က အမှန်တော့ TweetDeck နဲ့ ပြိုင်ဖက်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ အရင် tweetDeck က iPhone App မှာ free ရတယ် twitter ကော facebook ကော app တစ်ခုထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့ အသုံးများပါတယ်။ အခု Seesmic ပါဝင်လာပြီဆိုတော့ TweetDeck နေရာမသေချာတော့ဘူး။ FaceBook, iPhone, twitter	Continue Reading
Watch Live Twitter Conference Now!!
On April 14, 2010	by Htoo Tay Zar	With	0 Comments	- Tech News	You can watch Twitter Conference San Francisco Live Now @ Justin.tv. Best thing is you don’t need to pay 400+$ to attend that Conference =P. Now Twitter CEO @ev is talking about Twitter Users Around the World. Today Twitter will introduce “Promoted Tweet“… And Of course, “Twitter for iPhone App” (former Twittie 2).
Happy Birthday to4Years Old Twitter
On March 21, 2010	by Htoo Tay Zar	With	1 Comments	- Tech News	ဒီနေ့ March 21 ရက်မှာ Twitter ဆိုတဲ့ Microblogging, 140 characters Social Networking ဆိုဒ်ရဲ့ ၄ နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ပါ။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲ မနေ့ကတောင် ကျွန်တော် သူတို့ ရုံးခန်းပုံတွေ တင်လိုက်သေးတယ်။ ဒီနေ့က သူတို့ birthday ဖြစ်သွားပြီ။ twitter က Social Networking ဆိုဒ်တွေထဲမှာ ကျွန်တော် အကြိုက်ဆုံးပါ။ FaceBook ထက်ပိုကြိုက်ပါတယ်။ FaceBook မှာ ကြတော့ မြန်မာသူငယ်ချင်းတွေများပြီး twitter မှာတော့ နိုင်ငံခြားသား သူငယ်ချင်းတွေ ပိုများပါတယ်။
Birthday, twitter	Continue Reading
GeoLocation Tweets From Yangon!!
On February 3, 2010	by Htoo Tay Zar	With	1 Comments	- Knowledge, Myanmar news	Twitter က လူသုံးများလာနေတဲ့ Micro Messaging, Micro Blogging Site တစ်ခုဆိုတာတော့ အားလုံးလဲ သိပြီးဖြစ်မှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ ပြည်တွင်းမှာလဲ အရင် နှစ်တွေကထက်စာရင် အသုံးများလာနေပါတယ်.. ဒါပေမယ့် ဒီနှစ် အစ ဒုတိယ အပတ်လောက်မှာပဲ ISP က ban သွားပါတယ်။ ပြည်တွင်းက ပုံမှန် tweet တဲ့သူက ကျွန်တော်သိသလောက် မဘန်းခင် အချိန်တွေကတည်းက လူ ၃၀ တောင် မပြည့်ပါဘူး.. အဲဒီထဲကမှ Geolocation based tweet တဲ့သူဆို ပိုတောင်နည်းပါတယ်။
Burma, twitter	Continue Reading
On August 21, 2009	by Htoo Tay Zar	With	0 Comments	- Uncategorized	ဆိုကြပါဆို Twitter မှာ လူ အယောက် ၁၀၀ ပဲ ရှိတယ်ဆိုရင်… သူ့ရဲ့ အတင်းတုပ်တဲ့သူ၊ ဘာမှမပြောတဲ့သူ၊ စကားများတဲ့သူ၊ နားထောင်ပေးတဲ့သူ စတဲ့ အရေအတွက်ကို chart တစ်ခု လုပ်ထားတာ Flickr မှာ တွေ့လို့ ပြန်တင်လိုက်ပါတယ်။ ကြည့်လိုက်တော့ ကျွန်တော် က5percent ၂ ခုပြထားတာ ထဲမှာ အပါအ၀င်ပါ လားလို့.. ဆိုတော့ စကားများတဲ့ သူတစ်ယောက်ပေါ့.. မိတ်ဆွေကော ?? ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းတဲ့ idea chart မို့ တင်လိုက်တာပါ။ twitter, Web 2.0	Two Quick ~ Google + Twitter Search
On June 23, 2009	by Htoo Tay Zar	With	0 Comments	- Web	TwoQuick ဆိုတာ Google နဲ့ Twitter Search ကို ပေါင်းထားတာပါ။ Result ကို column ၂ ခုခွဲပြီး ပြပေးပါတယ်။ Google Search ကတော့ Google မှာ ရှာတဲ့ အတိုင်းပဲပြပေးပြီး Twitter Search Result ကိုတော့ Real Time Result နဲ့ပြပေးပါတယ်။ Home page က ရှင်းနေအောင် လုပ်ထားပြီး Everywhere နဲ့ Nearby ဆိုပြီး check2ခုထည့်ထားပါတယ်။
SE, twitter	Continue Reading
TweetStats ~ Analytics for twitter
On June 15, 2009	by Htoo Tay Zar	With	0 Comments	- Web, Web 2.0	TweetStats ဆိုတာက Twitter usage, trends, uptime, tweet condense တွေကို ရှာပေးတဲ့ web application တစ်ခုပါ။ Analytics လုပ်လို့ ရတာပေါ့။ ကျွန်တော်လဲ စမ်းကြည့်တော့ အောက်မှာ တင်ထားတဲ့ result တွေ ထွက်လာပါတယ်။ Graph တွေ အတွက် သူက flash သုံးထားပါတယ်။ Twitter User Name ထည့်လိုက်ရင် သိရပါပြီ… ပြပေးတာကတော့ အစုံပါပဲ အပေါ်က ပုံက ကျွန်တော်ရဲ့ Daily tweets Count ပါ။
Tweetie ~ Another twitter client for Mac
On May 10, 2009	by Htoo Tay Zar	With	5 Comments	- Mac	tweetie ဆိုတာ Mac အတွက် အသစ်ထွက်ထားတဲ့ twitter client တစ်ခုပါ။ ထွက်ထားတာ မကြာသေးပါဘူး.. မထွက်ခင်ကတဲက နာမည်ကြီးနေခဲ့တာပါ မထွက်ခင်က သူ့ရဲ့ teaser video ကြည့်လို့ ရတယ်။ ပုံမှန် Adobe AIR based twitter client တွေနဲ့မတူပဲ Mac only အနေနဲ့ ခွဲထွက်တဲ့ တစ်ခုပါ။ Mac, twitter	Continue Reading